Fampiharana ho an'ny iPhone | IPhone News (Pejy 13)
Ny fampiharana toetr'andro 5 tsara indrindra ho an'ny iPhone
Tianay foana ny hahafantatra izay hataon'ny toetr'andro, ary amin'ity tranga ity dia holazainay aminao hoe inona avy ireo safidy tsara indrindra hidirana amin'ilay vinavina amin'ny apps Weather ho an'ny iPhone.
Photo Sphere Camera, ilay fampiharana Google vaovao haka sary 360 degre
Google mandefa Photo Sphere Camera ho an'ny iPhone, fampiharana hamoronana sary 360 degre toa ny Street View
Rindrambaiko novolavolaina izay manafaingana ny famahana sy ny fanitarana ny androm-piainany
Ny fahasosorana ateraky ny faharetan'ny baterintsika dia mihoatra ny fahasosorana ateraky ny fotoana fanatanterahana ny fiampangana manaraka.
Camoji, mamorona ary mandefasa GIF mihetsika amin'ny alàlan'ny iMessage
Famakafakana ny Camoji, fampiharana ho an'ny iPhone sy iPad ahafahantsika mamorona GIF mihetsika sy mandefa azy ireo amin'ny iMessage
Alefaso amin'ny sary Instagram izay ao amin'ny solosainao miaraka amin'ny younity
Mandefasa sary izay anananao amin'ny solosainao na kapila mafy ao amin'ny Instagram avy amin'ny iPhone miaraka amin'ny younity.
Blue Downloader dia mamoaka tondra-drano kely ao amin'ny App Store
Apple dia tsy tia tondra-drano. Zava-misy io. Saingy nahavita nitondra ireo riaka tany amin'ny App Store i Blue Downloader, na dia ora vitsy monja aza no nijanonany.
Mitory ny Yelp izy ireo noho ny fanesorana ireo hevitra ratsy avy amin'ny orinasa sasany
Robbins Arroyo LLP Law Firm dia nanambara fa nametraka fitoriana ara-dalàna ho an'ny hosoka ny mpampiasa vola ao amin'ny ...
'Dreams', fanambarana vaovao momba ny iPhone 5S navoakan'i Apple
Apple dia namoaka fanambarana vaovao momba ny iPhone 5S izay manohy mampiseho amintsika ny fampiasana rehetra azontsika omena azy.
Tantano amin'ny alàlan'ny iPhone ny diabeta
Araka ny tatitra farany nataon'ny WHO (World Health Organization) dia olona 347 tapitrisa eran-tany no voan'ny diabeta, ary ny fifehezana izany no dingana voalohany.
ING Direct Mobile Banking, fampiharana izay mora ampiasaina
Ny fampiharana ING Direct vaovao dia manomboka miaraka amina endrika mahavariana
Sky Force 2014, mankalaza ny fahafolo taonany amin'ny fomba
Famerenana ny lalao Sky Force 2014 ho an'ny iPhone sy iPad, lalao sambo mankalaza ny faha-XNUMX taonany miaraka amin'ny sary sy lalao tsaratsara kokoa.
Ny ady goavambe, fiarovana tilikambo vaovao avy amin'ny Cartoon Network
Ny War Great Pranks an'ny Cartoon Networks dia azo alaina ao amin'ny App Store. Notsapainay ity lalao fiarovana menara ity ho an'ny iPhone sy iPad.
Ny zava-maniry vs Zombies 2 ho an'ny iPhone sy iPad dia novaina mba hanampiana ambaratonga vaovao, zavamaniry bebe kokoa ary fahavalon'ny zombie vaovao, ampidino izao ny lalao.
Ny tontolon'ny finday dia manohy manome antsika zavatra horesahina amin'ny lalao, ary amin'ity tranga ity dia asehonay anao ireo lalao 10 tetika tsara indrindra ho an'ny iPhone.
Raiso ny Gay, «Tinder» manokana ho an'ny vondrom-piarahamonina pelaka
Ny Take a Gay dia fampiharana ho an'ireo pelaka mba hihaona amin'ny olona vaovao misy zavatra mahaliana azy sy izay tiany, iza no mahalala, angamba mpivady.
Spotify ho an'ny fanavaozam-baovao an'ny iOS ary manampy ny feo mampitovy
Nohavaozina ny Spotify for iPhone mba hanampiana ekarista feo vaovao ahafahantsika manamboatra azy araka izay tiantsika hanatsara ny feo.
Junk Jack X, velona ny votoatin'ny fanaovana asa-tanana
Famerenana ny lalao Junk Jack X ho an'ny iPhone na iPad, lohateny iray izay mizara filozofia lalao mitovy amin'ny Minecraft na Terraria.
Rymdkapsel, lalao paikady izay ho tianao
Sintomy i Rymdkapsel, iray amin'ireo lalao paikady tsara indrindra ho an'ny iPhone na iPad izay dinihinay mba hahalalananao azy.
Raha maniry emojis ianao, anio dia asehonay anao ny Imojiapp, fampiharana iPhone hanovana ny sarinao ho emoticons.
Manomeza toerana malalaka ao amin'ny kaonty Gmail misy fika tsotra 5
Ny fizarana ny habaka Gmail amin'ireo serivisy hafa dia mampitombo ny filàna manatsara ny fahombiazan'ity habaka ity, ka ireto misy torohevitra vitsivitsy.
Game of Thrones dia efa ao amin'ny iPhone anao, raha mpanaraka ny andiany ianao dia tsy azonao adinoina ity fanitarana faobe ity ary manangana toetranao manokana.
Gameloft dia namoaka tranofiara vaovao ho an'ny famoahana Modern Combat 5: Blackout, misy ny 24 Jolay.
Fanadihadiana momba ny Geometry Dash, lalao mampiankin-doha ho an'ny iPhone sy iPad azonao sintonina avy amin'ny App Store hizaha toetra ny reflexes sy ny faharetanao.
Sary 3D miaraka amin'ny fampiharana 3DBin [maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra]
3DBin dia mpamorona vahaolana rindrambaiko ho an'ny sary diplaoma 360 ary androany dia namoaka ny fampiharana iPhone.
Manafaingana ny fotoana fampifanarahana amin'ny Drop ny Dropbox
Ny Dropbox dia manapaka ny fotoana ampifanarahana amin'ny rakitra amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny rafitr'izy ireo.
Efa manana Ingress izahay, ilay lalao zava-misy nampitomboina, ho an'ny iOS
Ingress dia eto, ny lalao izay tsy maintsy hidiranao amin'ny ekipa iray sy hikarohanao ny tanànanao mba hahitana soritra amin'ny angovo tsy fantatra izay manova ny olombelona.
Manatevin-daharana an'i Deezer i Orange mba hihaino mozika amin'ny finday nefa tsy mandany angona data
Manome maimaimpoana ho an'ny mpanjifany 2 volana ny Deezer Premium + ary 1GB fanampiny ho an'ny mpanjifany mba tsy handany ny taham-data ny fihainoana mozika.
Miaraka amin'ny FitRPG ianao dia mamadika ny Fitbit ho RPG
Ny Fitbit dia mety ho loharanom-panentanana lehibe ho an'ny fampihetseham-batana, fa raha mila fanerena fanampiny ianao dia andramo ny FitRPG
Ahoana ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny habaka Safari amin'ny alàlan'ny fanamaivanana ny toerana azo averina amin'ny tantara, cookies ary lisitra famakiana.
Ny fampiharana eltenedor dia manolotra fihenam-bidy fanampiny amin'ny trano fisakafoanana miaraka amin'ny Yums
elfork dia mandefa ny Yums, fanampiny ahafahana mitsitsy raha mankafy ny gastronomie ianao.
Ny fangatahana fanomezana ho an'ny fiangonana, maodely iray ho an'ny ONG
Givelify dia fampiharana iray ahafahanao manome ny vola tadiavinao amin'ny fotoana tadiavinao amin'ny tsindry tokana, maodely harahina ho an'ny fikambanana espaniola sasany.
Booming Industries dia mandefa ny fampiharana fankasitrahana endrika voalohany
Ny fampiharana Booming dia afaka milaza ny taona sy ny lahy na ny vavy na iza na iza manoloana ny fakantsary na hoe manana sary mihodina izahay.
Deezer dia nohavaozina amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny feo
Deezer dia namoaka fanavaozana manasongadina ny fanatsarana ny kalitaon'ny feo. Afaka mankafy ny mozikany amin'ny feo avo lenta ny mpampiasa izao.
Spotify dia mamela antsika hikaroka mozika amin'ny maody ivelan'ny seranana
Spotify dia ahafahan'ny fikarohana mozika amin'ny tabilao ivelan'ny Internet
Fly, mpamoaka horonantsary tsy mitovy amin'ny zavatra hitantsika hatreto
Fly dia aseho ho fampiharana tena vaovao miaraka amina fiasa tsy mbola fahita amin'ny iPhone
Manolotra tahiry rahona tsy voafetra ho an'ny multimedia anao i Shutter
Shutter, na Fakan-tsary tsy manam-petra araka ny iantsoan'ny mpandraharaha azy, no rindrambaiko fakantsary voalohany nanolotra horonan-tsary tsy voafetra ao amin'ny StreamNation.
Haingam-pandeha sy fahaiza-miasa miaraka amin'ilay tranokala Opera Mini 8 nohavaozina
Opera Software ASA dia namoaka ny rafitra Opera Mini 8 mamela anao hisafidy fomba telo hitetezana, nohavaozina tanteraka io ary misy dial hafainganana.
Sygic Free, filokana maimaimpoana vaovao ho an'ny fivezivezena GPS ivelan'ny Internet (sarintany TomTom)
Browser vaovao ho an'ny iPhone, maimaimpoana ary misy fividianana mifangaro. Izay rehetra ilainao nefa tsy mandany data.
iOS 8 amin'ny horonantsary (II): Siri
Asehontsika ny fomba fiasan'i Siri ao amin'ny iOS 8
Ny fampiharana Twitter izao dia mamela anao mampakatra gifs
Nohavaozina ny fampiharana Twitter mamela anao handefa gif animated
Aza hazavain'ny radara raikitra any Espana na Portugal miaraka amin'ity rindrambaiko ity izay mampitandrina anao amin'ny radara raikitra.
SpyMeSat dia mamela anao hividy sary zanabolana avo lenta
Ny fampiharana SpyMeSat dia miteraka fampandrenesana rehefa mandalo ny toerana misy anao ny satelita ary afaka maka sary.
Vodafone SmartPass dia manampy ny finday amin'ny iPhone
Tsy afaka mandoa amin'ny iPhone-nao? Eny, Vodafone SmartPass dia manampy an'ity iPhone ity amin'ny iPhone.
Ny rindrambaiko Kindle dia tafiditra amin'ny Audible
Ny rindrambaiko Kindle ho an'ny iOS dia mampiditra Audible
Vodafone SmartPass: mandoa haingana miaraka amin'ny iPhone (tsy avy amin'i Vodafone sy fanomezana 10 €)
Ny sticker Vodafone SmartPass dia hamela anao handoa amin'ny iPhoneo toy ny hoe manana NFC ianao.
Ovay ho lasa Nintendo Wii ny iPhone sy Apple TV anao
Ny fifandraisan'ny sensor dia natsangana tao amin'ny fivezivezin'ny iPhone sy ny fampisehoana amin'ny Apple TV dia mamerina ny zavatra niainan'ireo console toy ny Nintendo Wii.
Raha te hanohy hampiasa WhatsApp na Hangouts ianao dia aza apetraka ny iOS 8
WhatsApp sy Hangouts dia tsy mifanaraka amin'ny beta voalohany an'ny iOS 8
Famintinana ireo rindranasa hifehy ny fandaniana atolotra indrindra indrindra amin'ireo mpampiasa iPhone. Ny fifehezana ny volanao no dingana voalohany mankany amin'ny tahiry.
Esory ny sivana amin'ireo sary nalaina tamin'ny iOS 7
Azontsika esorina ireo sivana manelingelina. Manana fiaviana roa an'ny sivana hodinihina amin'ity lahatsoratra ity izahay, ireo izay avy amin'ny fampiharana Photos sy ireo izay avy amin'ny Instagram.
Autodesk dia nanamboatra tanteraka ny fampiharana AutoCAD 360 ho an'ny iOS
Autodesk dia nanamboatra endrika AutoCAD 360 tanteraka, ny fampiharana azy ho an'ny iOS izay ahafahanao mijery, manova ary mizara sary vita amin'ilay rindrambaiko.
Ahoana ny fomba fampidinana horonantsary YouTube amin'ny iPhone-nao
Hentitra loatra amin'ny toerany ny YouTube amin'ny tsy famelana ny fampidinana ireo horonantsary misy azy, miaraka amin'ireo torolàlana ireo dia azonao atao ny misintona azy ireo, amin'izao fotoana izao.
Fampiharana tena ilaina folo ao amin'ny iPhone raha mpampiasa Windows ianao
Raha iray amin'ireo mpampiasa Windows ao anaty telo ianao izay manana iPhone, mety tsy ho tsapanao fa afaka mampiasa sehatra roa ianao, mifanohitra amin'ny fomba mahazatra, hahazoana tombony azo avy amin'ny vokatra.
Netflix dia hamaha ny olan'ny Dolby Digital 5.1 amin'ny Apple TV
ActiveBoard: tweak hitazona ny fampandrenesana sy ny fampiharana tsy voafehy
Raha iray amin'ireo olona tia ny jailbrak ianao ary mahazo tombony betsaka amin'izany, dia tokony ho fantatrao ny tweak ActiveBoard hitazona ny fampandrenesana ho voafehy.
Dingana farany: atreho ny namanao amin'ny lalao mitifitra sazy amin'ny baolina kitra
Amin'ny Alakamisy dia ho hita ny lalao Kick Final, hiatrika ireo namanay amin'ny lalao famonoana sazy baolina kitra isika.
Ny emulator Nintendo GBA4iOS dia misy indray, aorian'ny fanesorana ny lalana mankany CoolROM avy amin'ny tranokala anatiny
Goat Rampage, simulator osy ho an'ny iOS
Goat Rampage dia simulator osy ho an'ny iPhone sy iPad izay azonao sintonina izao avy amin'ny App Store.
Infinity Blade III ho an'ny iPhone sy iPad dia novaina tamin'ny fanatsarana maro
Sintomy ny Infinity Blade III 1.3 ho an'ny iPhone sy iPad ary ankafizo ny vaovao rehetra entin'ny fanavaozana ity lalao ity miaraka amin'ny Unreal Engine 3.
Ringo, fampiharana ho an'ny antso iraisam-pirenena kalitao
Ringo dia fangatahana antso iraisam-pirenena vaovao ho an'ny iOS, Android ary Windows Phone, ny tanjony dia ny hahatonga ireo antso ireo ho fihetsika tsotra sy mora vidy.
Table Tennis Touch, ny lalao Ping Pong tsara indrindra noforonina ho an'ny iPhone
Fanadihadiana ny latabatra Tennis Touch, ny lalao Ping Pong tsara indrindra azonao sintonina ao amin'ny App Store
Avadiho ho lasa stethoscope ny iPhone-nao
Suman Mulumudi, tale jeneralin'ny StratoS Scientific, dia manolotra ny kojakoja antsoina hoe Steth IO, izay mikendry ny hamadika ny iPhone ho stethoscope.
Ny fanavaozana ny Instagram an'ny iOS dia manaisotra ny tiana amin'ny Facebook
Ny fanavaozana ny Instagram dia manaisotra ny tiana amin'ny Facebook, farafaharatsiny ireo izay nozarainao ho azy rehefa mampiasa ny bokotra amin'ny tamba-jotra sosialy misy sary.
Izahay dia mitondra anao an'ity tutorial kely ity hahafahanao mametraka ny vaovao farany avy amin'ny sakafonao tsy miverina miverina ao amin'ny fampiharana Facebook 10.0 ho an'ny iOS.
Metal Slug Defense, lalao mandao ny fakany be voninahitra
Metal Slug dia mitovy dika amin'ny arcade, farantsakely dimy dolara, tolakandro maro mankafy ny lalao hazakazaka mahafinaritra ...
Snapchat dia manampy resaka sy antso an-tsary
Snapchat dia manomboka mampiditra endri-chat vaovao amin'ny sehatra
TruSloMo: fampiharana izay ahafahanao mampiasa ny horonan-tsary mihetsika miadana amin'ny iPhone 5S amin'ny fampiharana hafa
Miaraka amin'ny fampiharana TruSloMo ao amin'ny AppStore, ireo mpampiasa iPhone 5S dia afaka mizara ny horonantsarin'izy ireo miadana amin'ny alàlan'ny rindranasa toa ny Intagram na Whatsapp.
Siri, Google Now ary Cortana, mifanatrika amin'ny horonan-tsary
Amin'ity horonantsary ity dia hahita ady kely isika hanapahana hevitra hoe iza no tsara indrindra amin'ireo mpanampy virtoaly telo lehibe azontsika jerena eny an-tsena.
MePass: fampiharana hamonjy ny teny miafinao rehetra amin'ny iPhone
Ao anatin'ny App Store dia misy ny rindranasa izay mety tena ilaina. Androany dia mamakafaka ny MePass; rindranasa hamonjy ny teny miafinao rehetra amin'ny iPhone.
Facebook Messenger manampy safidy vaovao amin'ny resakao
Nohavaozina tamin'ny safidy vaovao ho an'ny chat ny Facebook Messenger
Famerenana: Leica mifanaraka amin'ny fotoana ary mandefa fampiharana ho an'ny fakantsary vaovao
Mandinika ny fampiharana Leica izahay, natao ho an'ny fakantsary Leica T vaovao
Sintomy ny Sonic & All-Stars Racing Transformed maimaimpoana ho an'ny iPhone na iPad mandritra ny fotoana voafetra noho ity tolotra tsara ity ao amin'ny App Store.
Omaly dia niresaka momba ny iray amin'ireo vaovao WhatsApp mety hitranga izahay. Fantatsika izao fa ny WhatsApp dia haneho vondrona iraisana amin'ireo olona ifandraisanao amin'ny andiany manaraka.
Sivana vaovao WhatsApp no ​​sivana amin'ny resaka arisiva
Niharihary tsikelikely ny fisehoan'ny WhatsApp amin'ny ho avy ary amin'ity tranga ity, ny sarinà fiasa WhatsApp vaovao dia voasivana amin'ny resaka arisiva.
RollerCoaster Tycoon 4, hadalana izay tsy misy ifandraisany na tsy misy ifandraisany amin'ilay voalohany
Fanadihadiana ny RollerCoaster Tycoon 4 ho an'ny iPhone sy iPad, lalao simulation izay kely na tsy misy ifandraisany amin'ilay kinova voalohany.
Ny lalao miavaka amin'ny App Store dia mandresy amin'ny ady amin'ny Google Play
Android dia manohy mivoatra amin'ny terminal sy ny fampiharana, fa toa manohy mitarika amin'ny famoahana manokana i Apple.
Twitterrific for iOS dia mamela anao hanova ireo bitsika efa navoaka
Raha te-hanitsy ireo bitsika nalefanao hatrizay ianao, satria misy hadisoana na diso ny nandefasanao azy ireo, dia afaka miaraka amin'ny Twitterrific ho an'ny iOS ianao izao.
Pinnacle Studio ho an'ny iPhone dia misy izao
Corel nandefa ny Pinnacle Studio Video Editing App ho an'ny iPhone
Ahoana ny fomba hijerena ny lalao famaranana an'ny Copa del Rey (Real Madrid - FC Barcelona) maimaimpoana amin'ny iPhone
Lazainay aminao ny fomba ahafahanao mijery ity lalao manandanja ity avy amin'ny iPhone, raha tsy manana ny fahitalavitra eo akaiky eo ianao no safidy tsara indrindra.
Ny fampiharana Printer Pro, izay manonta avy amin'ny iPhone, dia maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny fampiharana Printer Pro dia ny App of the Day ao amin'ny App Store ary maimaim-poana misintona. Fanontana tsy misy tariby avy amin'ny iOS.
myMail: tantano ny mailakao amin'ny fampiharana tsotra sy feno
Asehonay anao ny iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hitantanana mailaka hitanay hatreto, miaraka amin'ny fampandrenesana sy ny interface mazava.
Fampianarana hametrahana ny emulator Nintendo DS amin'ny iPhone na iPad ary afaka milalao Super Mario na Mario Kart maimaim-poana ary tsy misy jailbreak.
Fahamarinana: fampiharana izay ahafahanao manoratra amin'ireo olona ifandraisanao nefa tsy fantatr'izy ireo hoe iza ianao
Ny fahamarinana dia fampiharana iray ahafahanao milaza ny marina amin'ireo olona ifandraisanao
Ny fampiharana tsara indrindra ho an'ny Twitter amin'ny iPhone
Nandinika rindrambaiko mpanjifa Twitter maromaro ho an'ny iPhone izahay ary nifototra tamin'ny tombotsoany sy lafy ratsy avy amin'ny rindrambaiko tsirairay, mifototra amin'ny vidiny.
Ny orinasa Dropbox dia nandefa ny fampiharana Carousel hitantanana ireo sary sy horonan-tsary ananantsika ao anaty rahona.
Shapematic: fampiharana izay mamadika ny iPhone ho scanner 3D
Mametraka rindranasa iPhone mahaliana eo alohanay indray izahay ary amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny Shapematic izahay hamadika ny iPhone ho scanner 3D.
Raketo horonan-tsary amin'ny kalitao 2K miaraka amin'ny iPhone 5S anao noho ny Ultrakam
Ny fampiharana Ultrakam dia misy ao amin'ny App Store, izay mamela ny fandraisam-peo amin'ny kalitao 2K, ambony noho ny an'ny iPhone 5S sy ny lavitra.
Ny rindranasa tsara indrindra hanarahana ny andianao amin'ny fahita lavitra
Manolotra anao compilation izahay miaraka amin'ireo rindranasa tsara indrindra misy ao amin'ny App Store hahafahanao manaraka ny fizotran'ny andian-tsarimihetsika tianao indrindra
Fandraisana fanampiny marobe dia ahafahanao manampy fampidirana amina mailaka amin'ny iOS
Ny App Store dia manohy manaitra ireo fampiharana ilaina isan'andro isan'andro. Androany dia hitantsika ny Attachments marobe, hanampiana miraikitra maromaro.
Ny fampiharana BeHere dia mampiasa iBeacons hanaraha-maso ny fanatrehan'ny mpianatra kilasy
Fampiharana vaovao antsoina hoe BeHere, natokana ho an'ny mpampianatra, mampiasa ny teknolojia Bluetooth LE iBeacon vaovao an'i Apple hahafantarana ireo mpianatra ary hanamafy ho azy ny fahatongavany any am-pianarana.
TodoMovies 3, tena ilaina ho an'ireo tia horonantsary
TodoMovies 3 dia tonga amin'ny App Store manatsara ny kinova taloha. Ny fampahalalana sy ny sarimihetsika rehetra amin'ny vanim-potoana rehetra ary havoaka.
Roamler dia manome vola anao hanamarina ireo isa amidy ao amin'ny orinasa
Roamler, ilay orinasa miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina finday ho an'ny fanaraha-maso ny toerana amidy dia tonga any Espana.
Wave, ny fampiharana tonga lafatra hahafantarana izay misy ny namanao amin'ny fotoana tena izy
Ny onja dia mamela anao hahafantatra amin'ny toerana tena izy ny toerana misy ny namanao na ny fianakavianao
Fintonic: ny fomba tsara indrindra hitehirizana dia ny fahalalana izay laninao (maimaimpoana ao amin'ny App Store)
Fintonic, ny volanao amin'ny endriny maimaim-poana izay manampy anao hitahiry.
Roku ho an'ny iOS fitaovana nohavaozina ho amin'ny andiany 3.0
Hita ao amin'ny App Store ny application RoomScan, izay mampiasa ny iPhone ho metatra efi-trano, ahafahanao mamorona ny drafitra sy ny atin'ny efitrano.
Sintomy ireo sary vaovaon'ny vaovaon'ny WhatsApp manaraka
Mety efa nahalala ianao fa efa ho avy ny kinova WhatsApp vaovao ho an'ny iOS. Anio dia asehonay anao ny fomba fampidinana ireo vola alohan'ny olon-kafa.
Ny motera sary Unity 5 dia hanatsara ny kalitaon'ny sary amin'ny lalao iOS
Unity 5 dia kinova vaovao an'ny motera sary 2D sy 3D izay hanatsara ny kalitaon'ny kilalao ho an'ny iPhone sy ny rafitra hafa. Jereo ny mety aminy
Loop, tambajotra sosialy hizarana ireo GIF tsara indrindra amin'ny Internet
Loop dia tambajotra sosialy vaovao mamela antsika hankafy ireo GIF tsara indrindra amin'ny Internet
WhatsApp dia nohavaozina amin'ny sehatry ny fiainana manokana
Ny rindranasan-kafatra hafatra WhatsApp dia nohavaozina ho an'ny iOS miaraka amina toe-javatra miafina vaovao ho an'ny mpampiasa toy ny fotoana hanehoana ny fifandraisana farany.
Freemake Musicbox: fampiharana hihainoana mozika amin'ny iPhone maimaimpoana ary tsy misy fetra
Ao amin'ny App Store, indraindray dia gaga anay ireo fampiharana tsy dia fantatra loatra. Amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny Freemake Musicbox isika, hihaino mozika maimaim-poana tsy misy fetra.
Kitendry Adaptive: ovao ny loko fitendry arakaraka ny fampiharana ampiasainao (Cydia)
Recargapp, mba hamerenana ny fandanjana ny olona, ​​ny mpandraharaha ary ny toerana
Ny orinasan-telefaona rehetra dia manana fangatahana ahafahan'izy ireo mamerina ny fifandanjana. Amin'ity tranga ity dia mitondra safidy hafa iray aho izay mampivondrona ireo safidy hafa hita teo aloha; Reload app
Ny fampiharana sary tsara indrindra ho an'ny iPhone
Ny fanangonana ny fampiharana tsara indrindra amin'izao fotoana izao ao amin'ny sokajy fakana sary an'ny App Store ho an'ny iPhone, izay ahazoana valiny tsara.
Tena mora ny mampiditra rindranasa efa misy ao amin'ny CarPlay
Raha ny filazan'ny mpamorona iHeartRadio dia mora ny mampiditra rindranasa ao anaty CarPlay satria Apple dia nanao asa tena tsara tamin'ny fampivoarana ny API.
Mahazoa Prince of Persia, ny aloka ary ny lelafo
Mandritra ity volana ity dia azonao atao ny mahazo ny lalao Prince of Persia: The Shadow and the Flame maimaim-poana. Manazava ny fomba.
Lisitr'ireo retrogames misy ho an'ny iPhones anay ary tsy ho very ireny lalao video tany am-boalohany ireny izay nahafaly anay nandritra ny ora maro.
Ny StackMotion dia mamela anao manampy chroma amin'ny horonan-tsarinao sy ny sary mivantana amin'ny iPhone-nao
StackMotion dia rindrambaiko fanindriana sary mandroso izay hanamafisana ny sary amin'ny alàlan'ny fampifangaroana sary, horonan-tsary, lahatsoratra ary mozika.
Amin'ny AnyFont dia azo atao ihany amin'ny farany ny fametrahana fonosana TrueType (.Ttf) na OpenType (.Off) fanampiny amin'ny iPhone na iPad
Monkey Boots, lalao iray hafa hialana raha tsy te-hihifehy ianao
Monkey Boots dia lalao iray tena mampiankin-doha ho an'ny iPhone izay manaraka aorian'ny Flappy Bird mba hampidirina amin'ny mpampiasa amin'ny fomba mora indrindra.
Ny lalao tsara indrindra ho an'ny iPhone amin'ny sokajy mpihazakazaka tsy misy farany na mihazakazaka mamaky ny scenario alohan'ny hahafatesany, mahazo ny isa ambony indrindra.
Sleep Gear: fampiharana manampy anao hiala sasatra, hisaintsaina ary hatoriana
Sleep Gear: fampiharana miorina amin'ny feo izay hanampy anao hiala sasatra, hisaintsaina ary hatory.
Stamphoto, afaka manana sary manana sanda ara-dalàna amin'ny iOS isika izao
Ny fampiharana Stamphoto dia teo amin'ny tsenan'ny Android nandritra ny fotoana fohy, ary ny alarobia lasa teo lasa teo ...
Apple dia namoaka torolàlana momba ny "Designing Great Apps"
Torolàlana vaovao momba ny famolavolana fampiharana lehibe, miorina amin'ny traikefan'ny mpampiasa takian'i Apple amin'ny fampiharana rehetra ao aminy.
WhatsApp for iOS dia hamela anao hisafidy ny olona hanehoana ny toerana sy ny sary
Ny tsaho momba ny fanavaozana manaraka dia mampiseho ny sarin'ny WhatsApp ho an'ny iOS izay hahafahantsika misafidy hoe iza amin'ireo mpifanerasera aminay no haneho ny toerana sy ny sary.
Ireo fampiharana izay entin'i Korea antsika, hamela antsika tsy hiraharaha izy ireo?
Korea, amin'ny alàlan'ny NIPA dia mampiroborobo ny famoronana sy ny fampandrosoana ireo orinasan-teknolojia, ny sasany amin'izy ireo dia nitondra ny fampiharana azy ireo tao amin'ny MWC14 ary eto izahay dia mamintina ireo izay ao amin'ny magazay Espaniôla.
Fanatsarana ny antontan-taratasy 5: ny fitaovana mety hitantanana ny antontan-taratasinao
Ny Documents 5 dia havaozina ho amin'ny andiany 5.0 miaraka amin'ny vaovao mahaliana
Fampiharana iOS 3 mandrefy ny tahan'ny fitempon'ny fonao
Ireo fampiharana iOS telo ireo dia mandrefy ny tahan'ny fitempon'ny fonao amin'ny fakan-tsarin'ny fakan-tsarinao. Miaraka amin'izy ireo dia afaka manolotra fandrefesana sy statistika izahay hanaraha-maso ny asan'ny fo.
GoodBarber: tranonkala iray ahafahanao mamorona rindranasa ho an'ny iOS tsy mila fahalalana momba ny programa
GoodBarber: tranonkala iray ahafahanao mamorona rindranasa ho an'ny iOS tsy mila fahalalana momba ny programa.
Solosaina WhatsApp ho an'ny Anti-Facebook
Ny fividianana WhatsApp amin'ny alàlan'ny Facebook dia nahatonga ny maro amintsika hanana lavaka amin'ny fandefasana hafatra eo noho eo. Heveriko fa tsy misy aminay manokana amin'ny serivisy.
Lisitry ny fampiharana podcasting tsara indrindra. Safidy ankehitriny ary hidirantsika hiady hevitra momba ny safidin'ny mpilalao tsirairay. Mandrosoa ary manome hevitra.
IQTELL dia rindranasa iray izay mampiaraka singa mamokatra isan-karazany ary manampy anay hitantana ny asanay sy ny mailaka rehetra amin'ny toerana iray
Ny fandefasana fampiharana mazava tsara miaraka amin'ny Launch Center Pro dia tsotra sy haingana, izay soloin'i Siri.
GBA4iOS, ny emulator Game Boy anao tsy mila Jailbreak
Ny Game Boy emulator, GBA4iOS dia azo alaina izao fa tsy mila Jailbreak.
Ilaina ny fampiharana finday Air Europa vaovao raha mikasa ny handeha amin'ity zotram-piaramanidina ity ianao
Telo: ny piozila isa izay mandresy ao amin'ny App Store
Threes dia lalao ankamantatra isa izay miainga ao amin'ny fivarotana app.
Flappy Bird dia mahatratra 50 tapitrisa alaina ary mitentina 50 XNUMX dolara isan'andro
Flappy Bird, dia nahatratra 50 tapitrisa ny fisintomana tamin'ny sehatra anaovana azy, ka miteraka 50 XNUMX dolara isan'andro ho an'ny mpamorona azy.
Phonejoy dia manome lisitry ny lalao App Store mifanaraka amin'ny mpanara-maso MFi
Phonejoy, izay manolotra mpamatsy mpampiasa madio ahafahanao mizaha lalao 150 ho an'ny iOS 7, izay mifanaraka amin'ny fitaovana filalaovana MFi.
Final Fantasy VI no voalohany amin'ny iOS
Final Fantasy VI, "Famerenana ny VI tany am-boalohany," hoy i Takashi Tokita, solontenan'ny orinasa Square Enix, saingy misy fanatsarana izay mampitombo ny filalaovana finday.
Google Wallet dia nohavaozina miaraka amin'ny safidy hijerena karatra fahatokisana
Google Wallet dia nohavaozina miaraka amin'ny safidy hijerena karatra fahatokisana ary hanampy safidy vaovao
Mamorona sary misy sary Instagram miaraka amin'i Wallgram
Raha tianao ny tambajotra sosialy Instagram, azonao atao ny mamorona sary mihintsy ho an'ny iPhone amin'ny alàlan'ny sary media sosialy miaraka amin'ny fampiharana Wallgram.
Monster Legends Mobile: manjaka ny biby amin'ity lalao ity ho an'ny iPhone
Monster Legends dia lalao hampandehanana biby ary hiampita azy ireo hahazoana karazana vaovao.
Miseho amin'ny Shark Tank ny Cycloramic ary mahazo fampiasam-bola $ 500.000 sy alaina 100.000 XNUMX ao anatin'ny adiny iray
Miliardaire sy tycoons dia mampiasa vola amin'ny Cycloramic. Ny Show dia mitarika ny fisintomana sy ny fanombanana ny orinasa.
sxCam: fampiharana hamonjy sary miafina (App Store)
Ny sxCam dia hamela anao haka sary ary hanafina azy ireo hiala ao anaty roul.
Apple dia manala ireo Keynote Remote avy amin'ny App Store
Keynote Remote dia tsy ao amin'ny Apple Store intsony, ny fanavaozana Keynote dia nahitana ny safidin'ny fanaraha-maso lavitra sy ny fitaovana iraisana.
Apple manavao iMovie amin'ny fitaovana vaovao
Fitaovana vaovao amin'ny iMovie kinova 2.0
Polaroid manavao Polamatic, ny App ho an'ny iPhone
Polamatic, ny fampiharana Polaroid ofisialy, nohavaozina tanteraka mba hahazoana traikefa akaiky ny fitifirana amin'ny fakantsary tena izy.
Apetaho amin'ny iPhone ny iPhone 3D fa tsy mila solomaso amin'ny EyeFly3D
Ovay ho lasa efijery 3D ny iPhone-nao, amin'ny alàlan'ny fametrahana ny mpiaro ny efijery EyeFly 3D eo fotsiny. Ity mpiaro ity dia tsy manova ny fahitana 2D ary miaro ny terminal anao koa.
Horizon, fampiharana vaovao ahafahanao manadino ireo sary sy horonantsary mitsangana
Horizon dia rindrambaiko iray ho an'ny iOS izay mamboly ny horonantsarinao hanome anao ny tahan'ny 16: 9, miantoka ny fahitana ny horonantsary jerena hatrany.
Chrome for iOS dia afaka handika ireo pejy notsidihinao
Chrome for iOS dia hanatsara ny traikefa amin'ny safidy handikana ny pejy amin'ny fiteny iray amin'ny fiteny iray hafa ary hametahana ireo pejy hampihena ny fihinanana.
Nanomboka nanoro ny tobin'ny mpampiasa azy i Pandora
Pandora dia nohavaozina ny tolo-kevitry ny gara
Ity herinandro ity PAC-MAN dia nasongadina ho fampiharana amin'ny herinandro ao amin'ny App Store, ka mandritra ireo andro ireo dia azo maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra ho an'ny iPhone, iPad ary iPod touch.
Fampiharana ao amin'ny App Store amin'ny € 899,99 hahazoana dokambarotra mora vidy
Hitanay fa misy fampiasa sasany mampiasa tetika miaraka amin'ireo fampiharana amin'ny $ 899,99 App Store hahazoana dokam-barotra lafo vidy.
Nubico: ny eBookanao ao anaty rahona sy amin'ny fitaovanao rehetra
Nubico dia rindrambaiko iray ahafahanao mankafy ny eBooks rehetra ao anaty rahona sy amin'ny fitaovana maro miaraka.
Tianao ve ny Modern Combat 4? Afaka mahazo kopia maimaimpoana ianao izao
Nanomboka fampiroboroboana vaovao ny IGN mba hisintomana ny lalao Modern Combat 4 ho an'ny iPhone sy iPad maimaim-poana, lohateny izay mampifangaro ny hetsika ao amin'ny FPS
Viafirma, sonia miaraka amin'ny ID anao amin'ny iPhone
Viafirma, ny vahaolana hanasoniavana ny antontan-taratasinao mivantana amin'ny iPhone na iPad miaraka amin'ny lanja ara-dalàna rehetra.
7 Min Workout, ampidino maimaim-poana avy amin'ny fampiharana Apple Store
Ny fampiharana Apple Store dia ahafahantsika misintona Workout 7 Min maimaim-poana, fampiharana iray izay mitazona antsika hifanaraka amin'ny 7 minitra fotsiny amin'ny fotoantsika isan'andro.
SystemIC: manafoaka toerana, loharano ary manatsara ny iPhone tsy misy jailbreak (App Store)
SystemIC: manafoaka toerana, loharano ary manatsara ny iPhone tsy misy jailbreak (App Store).
Tadaa, fampiharana izay manome ny halalin'ny sahan'ny SLR iray
Tadaa dia rindrambaiko iray izay manahafana ireo karazana effets ireo haka sary an'i iPhone dingana iray lavitra kokoa.
Spotify for iPhone izao dia mamela anao hihaino mozika maimaim-poana amin'ny maody tsy misy dikany noho ny fanavaozana ny fampiharana azy ho an'ny iOS.
iSelfie dia rindranasa maimaimpoana mamela anao haka sary amin'ny fitaovana iOS, mifehy azy amin'ny lavitra amin'ny fitaovana iOS hafa.
Amin'ity rindrambaiko ity dia tsy ho olana intsony ny fananganana sary mihetsika ao amin'ny iOS 7
Amin'ity fampiharana ity dia afaka mamaha ny olan'ny iOS 7 isika rehefa mametraka sary an-tsehatra, hisorohana ny zoom.
Lazainay aminao ny dingana manaraka hanarahana raha voajirika ny kaontinao Snapchat
Ankehitriny ianao dia afaka mahazo Scanner Pro maimaim-poana, ilay fampiharana mitarika scan ny antontan-taratasy amin'ny iPhone
Hatsarao ny fifandraisana amin'ireo mpanjifanao, asio CRM amin'ny iPhone-nao
CRM dia fomba fitantanana orinasa, mifototra amin'ny fifandraisana amin'ny mpanjifa, amin'ity lahatsoratra ity dia manolo-kevitra ny fampiharana vitsivitsy izahay izay hanampy anao hitazona hatrany ity fitantanana ity.
Ny fampiharana iOS tsara indrindra tamin'ny 2013 [Famintinana]
Ny fampiharana tsara indrindra tamin'ny 2013 ho an'ny iOS. Famintinana ny fampiharana dimy ambin'ny folo izay ilaina amin'ny fitaovana rehetra.
Manomboha mahazo karama amin'ny tombontsoa na amin'ny tsy miankina amin'ny 2014
Fampiharana izay manampy antsika isan'andro amin'ny mpiasa na mpiasa tsy miankina, ity lahatsoratra voalohany ity dia manolotra ny fototry ny orinasa vaovao, ny fiandohana.
Plague Inc, mamorona areti-mandoza anao hampitsahatra an'izao tontolo izao
Plague Inc dia lalao paikady ho an'ny iPhone sy iPad izay tsy maintsy hamoronana aretina iray izay mamarana ny ain'ny olombelona isika.
Numtris fomba vaovao hilalao amin'ny isa amin'ny iPhone
Ny lalao ho an'ny iOS, Numtris, fomba vaovao hilalaovana kofehy isa ary hanala azy ireo amin'ny solaitrabe, ny safidy Premium ary ny Freemium hisafidianana amin'ny ambaratonga 10.
Traffic Racer, zahao ireo reflexeso manalavitra ny fivezivezena
Fanadihadiana ny lalao Traffic Racer ho an'ny iPhone sy iPad izay tsy maintsy hialanao amin'ny fivezivezena sy hanatsarana ny fiaranao hitety lavitra.
Zara ho an'ny iPhone, fampiharana tsara raha mahazatra ianao any amin'ny fivarotany
Zara ho an'ny iPhone no filohan'i Zara haneho ny katalaoginy amin'ny iPhone
Fa maninona i Siri no milaza fa ny 27 Jolay 2014 no andro fanokafana ny vavahadin'ny helo?
Tamin'ity herinandro ity dia nisy ny sarin'i Siri izay niely, toy ny afon'ala, tamin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy. Rahoviana…
Ahoana ny fomba hijerena raha toa ka nandresy ny loteria avy amin'ny iPhone ianao
Ahoana ny fomba hijerena raha toa ka nandresy ny loteria mivantana avy amin'ny iPhone ianao.
Nike + Running dia navaozina niaraka tamin'ny lahasa 'Nike + Coach'
Ny fampiharana mihazakazaka noforonin'i Nike, Nike + Running, dia nohavaozina mba hahitana ny fampiasa 'Nike + Coach' vaovao, mpanazatra manokana ho an'ny fanamby.
'Ratchet & Clank: BTN', azo alaina ho an'ny iOS izao
Ratchet & Clank: BTN, lalao vaovao maimaim-poana an'i Sony ho an'ny iOS 7. Mpihazakazaka tsy manam-petra, toa ny Temple Run, miaraka amin'ireo singa mahazatra rehetra amin'ny franchise Sony malaza.
'Fruit Ninja' dia manolotra sabatra vaovao sy rafitry ny fanamby
Ny voankazo Ninja dia novaina tamin'ny sabatra vaovao, fiaviana lalao ary rafitra fanoherana
Real Racing 3 dia havaozina miaraka amin'ny multiplayer amin'ny fotoana tena izy
Ny lalao iPhone Real Racing 3 dia nohavaozina ao anatin'izany ny fiara vaovao sy ny maody multiplayer vaovao amin'ny fotoana tena izy mba hifaninana amin'ireo namanay 4.
Instagram Direct dia mamela anao hamafa ny sarinao na ny horonan-tsarinao amin'ny fotoana rehetra
BBVA Wallet dia mitondra carte de crédit amin'ny iPhone
BBVA Wallet dia mahatalanjona
Fampiharana momba ny fahasalamana sy fahasalamana 10 ambony tamin'ny 2013
Izahay dia manolotra ny fampiharana 10 fahasalamana sy fanatanjahan-tena tsara indrindra ho an'ny iPhone amin'ny taona 2013, tsy misy fialantsiny ahazoana miendrika endrika miaraka amin'ny hevitray
Alice ao amin'ny tanin'ny teny: fifangaroan'ny letris sy vatomamy
GTA: San Andreas dia azo alaina ao amin'ny App Store ankehitriny
Azonao atao izao ny misintona ny lalao GTA: San Andreas ho an'ny iPhone sy iPad, kinova remastered izay hanome anao fahafinaretana mihoatra ny 70 ora.
Ny zava-maniry vs Zombies 2 dia novaina tamin'ny atiny vaovao
Ny zava-maniry vs Zombies 2 ho an'ny iPhone sy iPad dia nohavaozina mba hanampiana sarintany vaovao, fahavalo fanampiny, ary endrika vaovao manatsara ny lalao.
Instagram manampy hafatra mivantana amin'ny fanavaozana farany
Instagram manampy Instagram Direct hahafahantsika mandefa hafatra mivantana amin'ireo mpampiasa hafa
Nohavaozina ny WhatsApp ary mifanaraka amin'ny iOS 4 izao [havaozina]
Vao nohavaozina ny WhatsApp ka efa misy tanteraka amin'ny iOS 4 izao, ny rafitra fiasa izay tsy nanohana ny iPhone 3G intsony.
Raha toa ka mpilalao tsy misy isalasalana isika dia efa miandry ny fanavaozana ny lalao ankafizintsika maro ho an'ny ...
Ny fampiharana Nike + FuelBand dia mampiditra fanarahana torimaso
Ny fanavaozana vaovao ny Nike FuelBand dia mitondra fanatsarana ny fanarahana torimaso, ny fotoana natokana ho an'ny hetsika vaovao ary ny fifandraisana tsara amin'ny namana.
Ny fampiharana toetr'andro 10 tsara indrindra tamin'ny 2013
Ny fampiharana toetr'andro tsara indrindra tamin'ny 2013, fanangonana izay mitady ny fampiharana tsara indrindra amin'ny sehatra misy azy miaraka amin'ireo fampiharana tsara indrindra.
Apple dia mandefa ny fampiharana '12 andro fanomezana 'ao amin'ny App Store
Apple dia natomboka tao amin'ny App Store ny fampiharana nentim-paharazana '12 andro fanomezana' izay manome atiny feno karama ho an'ireo mpampiasa iOS mandritra ireo daty ireo
Fanavaozana Uber mampiseho ny tahan'ny fomba mangarahara kokoa
Ny serivisy taxi Uber izao dia mampiseho mangarahara kokoa
Ahoana ny fampidinana ny Infinity Blade II maimaim-poana
Ny lalao ho an'ny iOS Infinity Blade II dia azo sintonina maimaim-poana amin'ny alàlan'ny kaody iTunes omen'ny tranokala fandalinana lalao video IGN antsika.
Ampiasao ny vokatra mahafinaritra mandritra ny fandraisam-peo amin'ny Spotliter
Spotliter dia fampiharana horonantsary maimaimpoana izay mihatra hatramin'ny 12 vokany. Ny asa rehetra dia atao amin'ny alàlan'ny efijery mikasika sy amin'ny HD
Ireo no fampiharana sary tsara indrindra folo tamin'ny 2013
Izahay dia manome anao famintinana ireo izay fampiharana folo tsara indrindra tamin'ny sehatry ny sary tamin'ity taona 2013 ity.
Ny mpitantana sary Ember dia efa manana fampiharana ho an'ny fitaovana iOS
Realmac Software dia mamoaka Ember Image Manager ho an'ny iPhone
Readdle dia mandefa ny PDF Expert 5 ao amin'ny App Store hitantanana sy hanova ireo rakitra PDF
Ny fanavaozana ny WhatsApp vaovao dia mety hiteraka fanjifana bateria be loatra
Ny fanavaozana ny WhatsApp vaovao dia mety hiteraka fanjifana bateria be loatra noho ny "fanavaozana ny background".
Ny fanavaozana WhatsApp dia misy ao amin'ny App Store
Ny kinova WhatsApp vaovao izao dia azo alaina ao amin'ny App Store miaraka amin'ny hatsaran-tarehy iOS 7 vaovao
MEGA dia efa manana ny fampiharana ofisialy ho an'ny iPhone an'ny Apple
Ovao ny ContactsXL ny fijerin'ny bokin'ny adiresinao
ContactsXL dia manolotra safidy iray hafa ho an'ny fampiharana iOS Contacts, mitandrina kokoa ary misy safidy maro hafa
Famintinana ny fifampiraharahana amin'ny Zoma Mainty any Etazonia ho an'ny Apple
Famintinana fohy izay manasongadina ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny fividianana ny vokatra Apple amin'ity zoma mainty ity any Etazonia. Anisan'izany ny fihenam-bidy hatramin'ny 200USD
Ny Spots-ko, fampiharana hizarana toerana hampiharana ny BMX sy Skate erak'izao tontolo izao
Ny fampiharana My Spots dia misy izao, hitadiavana toerana vaovao hankafizana skateboarding sy bmx manerana an'izao tontolo izao noho ny iPhone.
Manolotra tolotra mahavariana amin'ity zoma mainty ity i K-tuin
K-tuin dia mitondra fihenam-bidy lehibe amin'ity Zoma Mainty ity, tarihin'ny fihenam-bidy 150 euro amin'ny fividianana Apple Mac.
Jetpack Joyride dia navaozina tamin'ny fampidirana fiara vaovao
Jetpack Joyride dia nihatsara niaraka tamin'ny fiara vaovao sy ny fampisehoana tsaratsara kokoa
Fanavaozana ny Tweetbot 3 miaraka amina lohahevitra isan'alina sy fanovana kaonty haingana
Tweetbot 3 dia nohavaozina ao anatin'izany ny lohahevitra vaovao amin'ny alina, ny fahaizana manova kaonty haingana, ary ny safidy sy fanatsarana hafa.
Lalao Infinity Blade maimaimpoana ao amin'ny App Store mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao ho an'ny iOS Infinity Blade dia azo alaina maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra noho ny herinandron'ny Black Friday, lalao misy sary mahavariana.
Apple dia nanambara fa amin'ity zoma 29 novambra ity, dia hanatanteraka ny "Black Friday" kilasiny iray andro izay ahitan'ny ampahan'ny vokatra marobe fihenam-bidy
Museek: mihaino mozika maimaim-poana amin'ny iPhone-nao
Museek, ilay fampiharana mamela anao hihaino mozika maimaimpoana amin'ny iPhone-nao
Ity misy topy mason'ny kinovan'ny whatsapp ho an'ny iOS 7.
Henoy ireo radio meksikana amin'ny iPhone miaraka amin'ny Radio México
Iray amin'ireo zavatra mandalo taona maro sy mandeha ny teknolojia vaovao ny radio, amin'ny farany tsy mitranga ...
Ny detector radar izay miaraka amin'ny iPhone
Ny Valentine One dia fantatry ny maro ho mpamantatra radara tsara indrindra eny an-tsena, ka izany no antony nieritreretan'ilay orinasa ...
Ao amin'ny iOS 7.0 Siri dia afaka mamaky ny hafatrao
Tsy takona afenina fa tonga lavitra i Siri tao anatin'ny roa taona lasa. Rehefa nivoaka tany ...
Apple manavao ny fampiharana iBooks ary mampifanaraka azy amin'ny iOS 7
Apple dia namoaka ny fanavaozana iBooks 3.2, izay mitondra fanovana vaovao namboarina tanteraka amin'ny rafitra fiasan'ny fitaovana miaraka amin'ny iOS 7.
Nohavaozina tamin'ny endrika vaovao sy safidy vaovao ny Facebook Messenger
Nanavao ny fampiharana Messenger azy ny Facebook, mampifanaraka azy amin'ny iOS 7 ary mamela ny fampiasana azy tsy misy kaonty Facebook.
Ny fampiharana Facebook dia havaozina manampy safidy vaovao ho an'ny iPhone sy iPad
Telegram: safidy tsara ho an'ny WhatsApp
Miresaka momba ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny WhatsApp izahay, haingana sy azo antoka kokoa.
My Movistar, ohatra tsara amin'ny fomba fahatezerana amin'ny mpanjifa
Ny rindrambaiko ofisialin'i Movistar dia tratran'ny bibikely izay manelingelina ny mpampiasa
VideoExplorer: ny fampiharana hilalao horonantsary an-tserasera (toy ny sarimihetsika sy andiany)
VideoExplorer dia fampiharana tonga lafatra hilalao sarimihetsika sy andian-tantara amin'ny Internet
Nike + Move, ilay fampiharana izay mampiasa ny sensor M7 an'ny iPhone 5s, efa misy izao
Nike dia efa nandefa ny fampiharana Nike + Move ao amin'ny App Store, izay mampiasa ny sensor M7 amin'ny iPhone 5s hahazoana ny hetsika rehetra nataonao.
Apple manavao ny rindranasa Remote izay ahafahanao mitantana ny iTunes sy Apple TV anao amin'ny fitaovanao.
Tetika dimy hahazoana bebe kokoa amin'ny BlackBerry Messenger ho an'ny iPhone
Fika kely dimy ilaina mba hanampiana antsika hivoaka bebe kokoa amin'ny BlackBerry Messenger, ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo an'ny BlackBerry ho an'ny iPhone
Hetsika ao anaty lisitra ao anatin'ny fampiharana Kalandrie, ho an'ny iOS 7
Fijerena ny fampiharana Kalandrie, zanaky ny iOS 7. Andao hojerentsika hoe aiza no manafina azy ireo.
Ny fanavaozana an'ity rindranasa malaza ity, izay maharitra fotoana lava, dia mety ho tonga afaka herinandro vitsivitsy.
Aloavy amin'ny karatra avy amin'ny iPhone
Azo atao izao ny mandoa vola amin'ny karatra amin'ny findainao. Mila mpamaky karatra tsotra fotsiny ianao ary izany no izy. Tena tsotra ary miaraka amin'ny fiarovana avo lenta
Nike nandefa ny fampiharana 'Nike SB' ho an'ireo tia skateboarding
Ny orinasam-panatanjahantena Nike dia nandefa ny fangatahana ho an'ny iOS, Nike SB, mikendry ireo mpanao skateboard manerantany hizara ny fandrosoany sy ireo fanamby atrehiny.
Fanadihadiana ny Mimpi ho an'ny iPhone, lalao an-tsehatra izay manome piozila maro isan-karazany hamahana azy koa.
Solosaina maimaim-poana amin'ny fampiharana Photos ao amin'ny iOS 7
Manolotra safidy hafa maimaimpoana efatra ho an'ny fampiharana iOS 7 Photos izahay.
Tweet7, mpanjifa Twitter amin'ny endriny iOS 7 madio indrindra
Tweet7 dia rindranasa vaovao ho an'ny Twitter miaraka amina endrika miharo tanteraka miaraka amin'ny iOS 7 ary amin'ny alàlan'ny fihetsika.
YouTube dia efa mamela antsika hisafidy ny kalitaon'ny fananganana horonantsary
Amin'ny fanavaozana farany ny fampiharana dia efa mamela antsika hisafidy ny kalitaon'ny playback an'ireo horonantsary ny YouTube
Runtastic Six Pack, mpanazatra hahazoana abs voafaritra
Runtastic Six Pack dia fampiharana ho an'ny iPhone sy iPad izay ahafahantsika manao sit-up noho ny drafitra fanofanana tena feno sy natao manokana.
MobiPast: fampiharana vaovao hanaraha-maso iPhones hafa (Cydia)
MobiPast, misy amin'ny Cydia, ahafahantsika mitsikilo na manara-maso iPhones hafa
Fampiharana 7 Tokony hampiasaina ny mpaka sary iPhone rehetra
Manolotra fandinihana ireo rindranasa 7 izahay mba hahazoana tombony betsaka amin'ny fakantsary iPhone amin'ny alàlan'ny fomba fampiasa amin'ny sary sy ny famerenana azy ireo indray.
Ny fanavaozana farany an'i Flickr dia ahafahantsika mampakatra sary ho azy
Susan Bennett no vehivavy nanonona ny feon'i Siri, mpanampy manokana izay hita ao amin'ny fitaovana Apple maro toa ny iPhone sy iPad
SlowCam, raketo horonan-tsary amin'ny 60fps amin'ny iPhone 5
SlowCam dia rindranasa ahafahantsika maka horonan-tsary amin'ny 60 fps amin'ny iPhone 5, izany hoe, misy vokany miadana miadana.
Earthquake 7 dia fampiharana iPhone tsy manan-tsiny izay mitatitra ny vaovao farany momba ny horohorontany nefa manafina emulator GBA ihany koa
Fanadihadiana ny FIFA 14 ho an'ny iPhone sy iPad, ilay lalao baolina kitra vaovao novolavolain'ny Electronic Arts izay azo sintomina maimaimpoana ao amin'ny App Store.
Ity no interface WhatsApp ho an'ny iOS 7
Ity no fisehoan'ny WhatsApp vaovao ho an'ny iPhone taorian'ny fahatongavan'ny iOS 7, endrika manoloana ny endriny izay ampiasain'ny Apple ao amin'ny OS-ny
Motocross Elite, dia lalao môtô mahafinaritra ho an'ny iPhone sy iPad izay tsy maintsy handresena hazakazaka amin'ny alàlan'ny fandresena ireo sakana sy ny fitsambikinana.
Ahoana ny fampidinana iWork (Pejy, Isa ary Keynote), iMovie, ary iPhoto maimaim-poana aorian'ny fanavaozana ny iOS 7.
Ny MyFitnessPal dia manampy anao hanisa marina ny kaloria hohaninao isan'andro
iFruit, ny fampiharana ahafahanao manitatra ny traikefa GTA V
iFruit dia mahatonga an'i GTA V hahaliana kokoa amin'ny iPhone-nao
Blur, fampiharana tonga lafatra hamoronana sary for iOS 7
Blur dia rindrambaiko ho an'ny iPhone na iPad izay mamela antsika hamorona sary mihasimba, tonga lafatra ho an'ny iOS 7.
Aiza ny ranoko? 2 no mamaky ny App Store, lalao mitovy aminy nefa misy ambaratonga bebe kokoa
Aiza ny ranoko? 2 dia efa misy ao amin'ny App Store for iPhone sy iPad, maimaim-poana ny lalao ankamantatra vaovao misy an'i Swampy voay.
Alzex Finance, fampiharana mahery vaika amin'ny fitantanana kaonty sy fitantanana kaonty
Alzex Finance dia fampiharana ho an'ny iPhone sy iPad izay ahafahantsika manara-maso ny fandaniam-bola alainay, ahafahantsika mitazona ny kaonty.
Ahoana ny fomba hahazoana tahiry Dropbox fanampiny 1GB rehefa mampiasa ny fampiharana Mailbox
Emulator SNES vaovao no miditra an-tsokosoko ao amin'ny App Store
Emulator SNES dia tonga tao amin'ny App Store ao anatin'ny fampiharana Grab Remote File Manager, mpitantana rakitra miaraka amin'ny fampidirana Dropbox.
Comunio Manager dia mamela anao hitantana ny ekipanao amin'ny iPhone
Mikey Hooks dia lalao an-tsehatra mahafinaritra ho an'ny iphone izay mamporisika anao hampidina anao satria mahafinaritra be izany.
Max Steel, mpihazakazaka tsy misy farany ho an'ny iOS avy amin'i Chillingo
Max Steel dia mpihazakazaka vaovao tsy manam-petra novolavolain'i Chillingo izay nankafiziny tato ho ato amin'ny iPhone na iPad.
Midina, ilay app taloha Bang whit Friends, izay miverina ao amin'ny App Store
Ny mpamorona ny Bang whit Friend dia mamerina ny fampiharana any amin'ny App Store miaraka amin'ny anarana Down, izany dia hahafantarana hoe iza no hiara-matory aminay.
Ny zava-maniry vs. Zombies 2 ho an'ny iPhone sy iPad dia novaina mba hanamboarana bibikely nahatonga ny lalao hianjera raha nifandray tamin'ny kaonty Facebook izahay
Atorinay anao ireto lalao mitondra fiara 5 ireto ho an'ny iPhone arakaraka ny laharana misy azy ao amin'ny App Store, Real Racing 3, Asphalt 8: Airbone, Need for Speed, Colin McRae ary F1.
Tsy mora ho antsika foana ny manao horonantsary tsara ho an'ireo tambajotran-tserasera ankafizinay, eto ianao no hahita tetika mety hahasoa anao.
WonderCam, fampiharana iray hafa ahafahana mametraka sivana amin'ny fotoana tena izy amin'ny sarinay sy horonan-tsary
Ao amin'ny App Store dia misy fangatahana maro ho an'ny sehatry ny sary fa WonderCam dia mendrika ny hanana fotoana eo amin'ny rehetra ...
Fanadihadiana ny lalao Asphalt 8: Airborne avy amin'ny Gameloft, ny lalao fiara farany farany azo alaina ho an'ny iPhone sy iPad.
Fiaiken-keloka: Ohatrinona ny vola laninao amin'ny Candy Crush Saga?
Miresaka momba ny fividianana inapp an'ny Candy Crush Saga izahay
Tube Downloader Pro, ampidino horonan-tsary amin'ny iPhone na iPad tsy misy jailbreak
Tube Downloader Pro dia fampiharana ho an'ny iPhone sy iPad izay ahafahantsika misintona horonantsary avy amin'ny YouTube sy vavahady hafa tsy misy jailbreak.
Torohevitra sy tetika handefasana mora kokoa ny haavon'ny Plants vs Zombies 2
Fetsy, fambara ary torohevitra handresena ny haavon'ny Plants vs Zombies 2 miaraka amin'ny fanamorana bebe kokoa.
Ny lalao paikady Plants vs Zombies 2 dia efa misy eran'izao tontolo izao hisintomana, maimaim-poana izany, fa raha hampiasa fahaiza-manao dia tsy maintsy aloa.
JustUnfollow, mpitantana kaonty ho an'ny Twitter sy Instagram izay tsy maintsy andramanao
JustUnfollow dia mpitantana ny kaonty Twitter sy Instagram hahitana hoe iza no manaraka anay na hahafantatra hoe iza ireo mpampiasa mamafa anay.
Ny fiakarana tsotra tsy mampino, Apple App amin'ny herinandro
Inona no tokony hanana fampiharana tsara? Ataovy tsotra ihany izany. Izany no aingam-panahy ho an'ny fampiharana tsara indrindra amin'ity herinandro ity araka ny voalazan'ny Apple, ilay famantaranandro fanairana Rise.
Inona no vaovao ao amin'ny WhatsApp, endri-tsoratra feo vaovao ary mpampiasa 300M
Te hanome lanja bebe kokoa ny serivisiny fanamarihana feo ilay WhatsApp goavambe fandefasan-kafatra, mampiditra safidy vaovao hanamora ny fampiasantsika azy
iSmoothRun Pro, fampiharana ho an'ireo mpihazakazaka mifanentana saika amin'ny zava-drehetra
iSmoothRun Pro dia fampiharana mahaliana raha atleta ianao ary manana Pebble
Izahay dia nanandrana ny Iconical, ilay fampiharana mamela anao hanova ny kisary fampiharana tsy misy jailbreak
Fanadihadiana ny fampiharana Iconical ho an'ny iPhone sy iPad izay mamela ny fanovana ny fisehon'ny sary masina tsy misy jailbreak.
Zavamaniry vs. Zombies 2, mitovy kokoa fa tsara kokoa
Fanadihadiana ny lalao Zavamaniry vs. Zombies 2. Jereo ny toro-hevitra sy ny tetika tsara indrindra hankafizana ity fiarovana menara PopCap ity.
OpenTable dia hamela antsika handoa trano fisakafoanana amin'ny app iPhone
Ny fisoratana anarana fisakafoanana an-tserasera OpenTable dia hanomboka hampahafantatra ny fahafaha-mandoa vola amin'ny orinasa mampiasa ny iPhone.
Minigore 2: Zombies ho an'ny iPhone, iPad na iPod Touch dia nampidina ny vidiny ary azo sintonina maimaim-poana.
Fitsapana ny sakafo, tadiavo izay rehetra fantatrao momba ny fahasalamana sy ny sakafo mahavelona
Runtastic indray dia mamporisika ny fahazarana mahasalama amin'ny Nutrition Test, fampiharana ho an'ny iPhone sy iPad izay novolavolain'ireo mpahay sakafo
Manana olana amin'ny Spotify sy Twitter ao amin'ny iOS 7 beta 4? Ireo no vahaolana
Manana olana amin'ny Spotify sy Twitter ao amin'ny iOS 7 beta 4? Eny, efa misy ny vahaolana
Torolàlana hahafahanao mampiasa ny mpanara-maso PS3 hilalaovana amin'ny iPhone, iPad na iPod Touch noho ny jailbreak Blutrol sy ny tweak
Lalao Football Quiz lalao mahafinaritra ho an'ireo tia baolina kitra
Google Drive dia nohavaozina miaraka amin'ny fanatsarana roa ho an'ny mpampiasa iOS
Lords of Blood - Vampir RPG: RPG eo anelanelan'ny vampira sy werewolves
Lords of Blood - Vampir RPG: lalao filalaovana eo anelanelan'ny vampira sy werewolves ho an'ny iPhone
Tumblr ho an'ny iOS dia nohavaozina manamboatra lesoka fiarovana lehibe
Tumblr dia namoaka fanavaozana lehibe ho an'ny fampiharana iOS izay manamboatra lavaka fiarovana matotra izay nanimba ny tenimiafina
Chrome for iOS dia nohavaozina amin'ny endrika vaovao maro
Chrome for iOS dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fampidirina amin'ireo rindranasa Google hafa, fanatsarana ny fikarohana amin'ny feo ary fampihenana ny fanjifana angona.